Umgubo wemveliso yesichumiso se-Foliar, umgca wemveliso yesichumisi esinyibilikayo emanzini, umgca wokuchumisa unkcenkceshelo wokunkcenkceshela ulungele ukupakishwa kwezichumiso zomgubo, ezinokusebenza nakweyiphi na imeko enzima, ngesantya sokupakisha ngokukhawuleza, ngokuchaneka okuphezulu kunye neqondo lokungaphumeleli okuphantsi. Isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yokulungisa isichumisi, i-agrochemical, ikhemikhali kunye nabavelisi bezichumisi ezihlanganisiweyo. Inkqubo yoyilo lomgca wemveliso engamanzi, uyilo lwezixhobo zokusebenza, kunye nokukhethwa kwezinto ziyahlangabezana neemfuno zokulwa nokubola. Izixhobo zinokucocwa ngokulula. Onke amalungu adibene nezixhobo zizi-304 zentsimbi okanye iplastiki ngokufanelekileyo.
Umgubo wemveliso yesichumiso se-Foliar, umgca wemveliso yesichumisi esinyibilikayo emanzini, umgca wokuchumisa unkcenkceshelo wokunkcenkceshela ulungele ukupakishwa kwezichumiso zomgubo, ezinokusebenza nakweyiphi na imeko enzima, ngesantya sokupakisha ngokukhawuleza, ngokuchaneka okuphezulu kunye neqondo lokungaphumeleli okuphantsi. Isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yokulungisa isichumisi, i-agrochemical, ikhemikhali kunye nabavelisi bezichumisi ezihlanganisiweyo.
Inkqubo yoyilo lomgca wemveliso engamanzi, uyilo lwezixhobo zokusebenza, kunye nokukhethwa kwezinto ziyahlangabezana neemfuno zokulwa nokubola. Izixhobo zinokucocwa ngokulula. Onke amalungu adibene nezixhobo zizi-304 zentsimbi okanye iplastiki ngokufanelekileyo.